३०० किलोमटिर रेञ्ज दिने ह्याचव्याक कार नेपाल आउँदै, कति पर्ला मूल्य ? - नेपाल कुरा
३०० किलोमटिर रेञ्ज दिने ह्याचव्याक कार नेपाल आउँदै, कति पर्ला मूल्य ?
३५ किलोवाट आवरको लिथियम आयोन व्याट्री जडान भएको यो कारले करिब ३०० किलोमिटर रेञ्ज प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ५५ किलोवाट क्षमताको मोटर जडान भएको यो कारले ४।८ सेकेन्डमा सून्यदेखि ५० किलोमिटरको स्पीड भेट्टाउन सक्छ ।
साउन अन्तिमसम्ममा नेपालमा विक्री सुरु हुने यो कारको मूल्य ३० लाखदेखि ३५ लाखको बीचमा हुने कम्पनी स्रोतले जानकारी दिएको छ । मेरोअटो
शनिबार र बिदाका दिन पनि बैंक खुला राख्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउने